Maxkamadda Ciidamada Puntland oo dil ku xukuntay rag ka tirsanaa Al-shabaab iyo Daacish – Balcad.com Teyteyleey
Maxkamadda Ciidamada Puntland oo dil ku xukuntay rag ka tirsanaa Al-shabaab iyo Daacish
Maxkamadda derajadda ee ciidamadda Qalabka ee 5ta gobol ee Puntland ayaa maanta la horkeenayay 11 eedaysane oo 8 ka mid ah lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen Kooxaha Al-shabaab iyo halka saddex qof ay Daacish ka mid ahaayeen.
Maxkamadu waxay dil ku xukuntay Labo eedaysane oo mid ka mid uu ahaa ganacsade, ciidamadda Puntland ay ka qabteen gudaha magaaladda Bosaaso 30kii bishii May , kaasi oo lagu eedeeyay inuu u socday baabuur lagu qabtay kontoroolka Bosaso oo siday Waxyaabaha qarxa iyo agab kale oo lagu soo dhexqariyay khudaar, sidoo kale Maxkamadu waxay xukuntay Nin kale oo ciidamadu ay ku qabteen Magaaladda Galkacayo, kaasi waday baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay
Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamadda Cawil Axmed Faarax oo ku dhawaaqay go’aanka Maxkamadda waxaa uu sidoo kale ku xukumay saddex Nin Xabsi daa’in, halka saddex kalena ay maxkamadu siidaysay markii lagu waayay wax dambi ah. Maxkamadu waxay dib u celisay dacwadda saddex nin oo kale oo ku eedaysnaa inay ka tirsanaayeen ururka Daacish.
30kii Bishii June, dowladda Puntland waxay xukun dil ah ku fuliyey 7 qof oo ku eedeysnaa in ay ka tirsanaayeen ururka al-Shabaab kuwaas oo dilal ka geystey gudaha Puntland sidoo kale lagu soo qabtey iyaga oo magaalada Bosaso gelinaaya jawaano ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa.
The post Maxkamadda Ciidamada Puntland oo dil ku xukuntay rag ka tirsanaa Al-shabaab iyo Daacish appeared first on Ilwareed Online.
DOWLADDA IYO SHACABKA IS JECEL YAAN LA ISKA HORKEENIN !!